नग्न योगबाट जे सिकेँ
इन्स सिएडमाय शनिवार, माघ २७, २०७४ 1384 पटक पढिएको
सांकेतिक फोटोः निकिहेनेस्से डटकम डट एयू
प्रेमीसँगको बिछोडपछि म २०१७ को अप्रिलमा जर्मनीको बर्लिन सहर गएँ। मैले बिछोडको यो समय आफ्नै अन्तर्मनलाई नियाल्न प्रयोग गरेँ। ‘आफैंलाई खोज्न’ मैले नयाँ प्रयोगहरू गरेँ। अन्ततः लामो समयदेखि पेन्डिङ रहेको होलिडे मनाउने क्रममा म सांगीतिक उत्सव र केही बौद्धमार्गीय ध्यानमा सहभागी भएँ। मैले भिगन (दही दूधसमेत नखाने व्यक्ति) बन्ने प्रयास पनि गरेँ। मेरो तालिकामा अर्को चीज बाँकी नै थियो— नग्न योग।
नग्न योगका बारे मैले पहिलोपटक इन्स्टाग्रामको ‘न्युड योग गर्ल’ भन्ने एकाउन्टमार्फत थाहा पाएँ। म योगलाई सधैं मन पराउँछु। हेर्दा राम्रो देखिनेमात्रै भएर होइन बलियो, थप लचकदार र अझ सन्तुलित हुने एउटा उपाय हो यो। योग गर्ने चकटीमा नांगै बस्नेबित्तिकै मैले आफैंलाई पहिलोपटक छुन पाएको अनुभूति गरेँ। तर नांगो र यस्तो ‘असुरक्षित’ अवस्थामा हुँदाहुँदै पनि त्यस्तो अनुभव हुन्छचाहिँ कसरी ? मैले आफैंलाई अनुभूत गर्न चाहेँ।
नग्न योगका बारेमा फेसबुकमा रहेको व्याख्या पढिसकेपछि फेसबुक इभेन्ट पेजमा गएर नजिकैको नग्न योग कक्षा ज्वाइन गर्न मलाई त्यति धेरै समय लागेन। म योगमा जान तयार भइहालेँ। एउटा कुरा भनौं ? त्यस बेलाका मेरा तस्बिरहरू हेर्नुभयो भने तपाईं पनि जान्नँ भन्नु हुनेछैन। यस्तो योगमार्फत आफ्नो शरीर, दिमाग र आत्माको भित्री संवेदनशीलता छामौं। त्यसो भएमा दैनिकजसो हामीले ओढ्ने आफ्नो बोक्रोभित्रको अमृतमा हामी मज्जाले डुब्न सक्नेछौं। हाम्रो योग कक्षामा २५ देखि ३५ वर्षसम्मका चारजना युवती र एक शिक्षक थिए।
म अहिले क्रोएजबर्गको योग स्टुडियोमा छु र यतिखेर बेलुकीको पौने ८ बजेको छ। मैले अहिल्यै कपडा फुकालिसकेको छुइनँ र बेचैन रूपमा चियाको चुस्की लिइरहेको छु। अर्धवृत्ताकार रूपमा गुन्द्री ओछ्याइएको छ। यसको कारण बुझिन्छ नै, नग्न योग गर्दा तपाईं कसैको पछाडि उभिन चाहनुहुन्न। गुन्द्रीको एक कुनोको पर्याप्त खाली ठाउँमा टी लाइट (चिटिक्क रेका चियाका कपजस्ता मैनबत्ती) र बुद्ध÷गणेशका मूर्तिहरू छन्। टन्न धुपको वासना चलिरहेको छ। जेन (महायान बुद्धिजम्को एउटा निकाय) वातावरणजस्तो महसुस भइरहेछ तर अलि थोरै बलजफ्तीपूर्ण। तर, यत्तिको ठीकै छ। मलाई मजै लागिरहेको छ।
म आफ्नो योग चकटीमा बसिरहेको छु। मभन्दा उतापट्टिको केटीले चकटी ल्याउन बिर्सिछन्। म उनलाई मेरो गम्छा दिन्छु। ‘साँच्चै तपाईंले मलाई गम्छा दिएकै हो ? ’ एकछिनपछि यो गम्छामा नांगै योग गर्ने कुरो सम्झँदै मलाई सोध्छिन्। तर, मलाई यसमा कुनै अप्ठ्यारो लाग्दैन। दराजबाट निकालिएको गम्छा उनी अलि असहज मान्दै नीलो कक्षको गुन्द्रीमा पसार्छिन्। बाहिर वातावरण अँध्यारो छ। चम्किलो बल्बको प्रकाश सर्वत्र फैलियोस् भन्ने ठानी हामी झ्यालका पर्दा लगाउँछौं। म आँखा बन्द गर्छु र सानो म्युजिक सिस्टमबाट आएको ‘इलेक्ट्रो–सेमन’ ध्वनि सुन्छु। मेरो मनमा भने एउटै कुरो खेलिरहेको छ, म एकैछिनमा कसरी नांगै हुने होला !
हाम्री शिक्षिका ड्यानियाल भने अहिलेसम्म पनि चितुवा प्रिन्ट भएको लेगिङ र गुलाबी ‘लेगवार्मर’मा सजिएकी छन्। नग्न योगले आफूलाई आफ्नो शरीर र मन राम्रोसँग चिन्न मद्दत गरेको, यसकै मद्दतले शरीरका आफ्ना कर्भ (शरीरका घुमावहरू)का बारेमा झनै गौरव भएको उनले हामीलाई बताइन्। आफ्नो योग कक्षामार्फत उनी अन्य महिला र युवतीलाई नग्न योगको रूपान्तरको शक्ति हस्तान्तरण गर्ने अपेक्षा राख्छिन्।
एकैछिनपछि नग्न अवतारको समय आउँछ। ‘तपाईं विस्तारै आफ्नो कपडा खोल्न सक्नुहुन्छ’, ड्यानियाल भन्छिन्। साँच्चै भन्नुपर्दा कसरी कपडा खोल्ने भन्ने कुराले म अन्योलमा पर्छु। झन्झटिलो टिसर्ट, स्पोर्ट ब्रा, योगको पाइन्ट, मोजा र अन्डरवेयर खोल्नुअघि म आफ्नो ज्याकेट खोल्छु। अरूहरूले एकैचोटी सबै लुगा खोल्दै गर्दा म एक–एक गरेर आफ्नो लुगा उतार्छु।
नग्न योगमा धेरै पक्ष छन्। ड्यानियलले व्याख्या गरेअनुसार यस्तो अभ्यास आफ्नो शरीरलाई राम्रोसँग बुझ्न र त्यससँग स्वस्थ सम्बन्ध राख्नका लागि आवश्यक छ।
म अब पूर्ण रूपमा नग्न भएँ। नग्न भएपछि म केवल बलपूर्वक मुस्कुराउँछु। अब पछाडि लुकाउनुपर्ने कुनै विषय बाँकी रहँदैन। तर एकैछिनमा फेरि पहिलाकै धारणामा पुग्छु, एकअर्कालाई कहिल्यै नचिनेका व्यक्तिहरू योगको गुन्द्रीमा किन नांगै ? ट्याटु, नमिलेका जन्मचिह्न (बर्थमार्क) र बेग्लाबेग्लै स्वरूप र आकारका स्तनका मुन्टाहरू देखेर मेरा आँखा यताउति स्वस्फूर्त रूपमा डुल्न थाल्छन्। योग कार्यशाला अघि बढ्दै गर्दा म आफ्नो शरीरप्रति झनै आकर्षित हुन थाल्छु।
‘आफ्नो शरीरलाई हातले छाम्नुहोस्’, ड्यानियाल हामीलाई सिकाउँछिन्, ‘आफ्नो छालाले कस्तो महसुस गर्छ, अनुभूत गर्नुहोस्।’ कक्षा चल्दै गर्दा मलाई नग्नता सहज लाग्दै जान्छ। तर यो योग कक्षा वास्तवमा अलि कठिन नै छ। म थकित आफ्नो हाँसोलाई अझ दृढ पार्ने प्रयास गर्छु। कहिल्यै नचिनेका व्यक्तिका अगाडि नांगा हातगोडा खुम्च्याएर बसेको यथार्थलाई बेवास्ता गर्दै म क्षणभरमै पूर्ण रूपमा वातावरणमा विसर्जित हुन्छु। योग गर्दै जाँदा झनै रमाइलो मुद्रा त्यतिखेर देखियो जतिखेर ढाडलाई जमिनमा सुताएर आफ्ना खुम्चिएको घुँडालाई समाउँदै खुला गोडाहरूलाई माथितिर उचालेर खुसी भएको बच्चाजस्तो भइयो। त्यतिखेर मेरो सम्पूर्ण शरीरका अंग अन्य साथीहरूले देखे।
यो कक्षमा आउनुपूर्व मेरा योगी साथीमध्ये धेरैले मैले नग्न योग गर्ने सुनाएपछि यो अभ्यास केवल सम्पन्न सेता केटीहरूको इन्स्टाग्रामबाट प्रभावित सनक भएको तात्तातो प्रतिक्रिया दिएका थिए। उनीहरूको त्यो मूल्यांकन पूर्णतया अनुचित नभए पनि नग्न योगमा त्योभन्दा धेरै पक्ष छन्। ड्यानियलले व्याख्या गरेअनुसार यस्तो अभ्यास आफ्नो शरीरलाई राम्रोसँग बुझ्न र त्यससँग स्वस्थ सम्बन्ध राख्नका लागि आवश्यक छ।
यस्तो अभ्यासले यौनजन्य विकृत धेरै व्यक्ति र नांगा तस्बिर हेरेर मजा लिनेहरूलाई सामाजिक मिडियामा आकर्षित गर्नसक्छ, तर यो यौनको विषय होइन। यसबारेको बोध तपाईंलाई त्यतिखेर हुन्छ, जतिखेर तपाईं आफू नग्न हुनुहुन्छ र कतिपय अप्ठ्यारो मुद्रामा आफ्नो मांसपेशी तान्न पुग्नुहुन्छ। संसारभरका धेरै महिला र युवतीले आफ्नो शरीर राम्रो नभएकोबारे गुनासो गर्ने गरेको सन्दर्भमा आत्मविश्वास बढाउने यस्ता खालका अभ्यासलाई तत्कालै इन्कार गर्नु उचित देखिँदैन।
मलाई लाग्छ, हामीले गरेका नग्न योगका मुद्राहरू अलि कठोर थिए। ती अनौठा पनि देखिए। यस्तो मुद्रामा रहँदा भुँडी कसरी चल्छ र शरीरको अवस्था परिवर्तन भएसँगै कसरी परिवर्तन हुन्छ भन्नेबारे यसमा देख्न पाइन्छ। तपाईंको मांसपेशी कसरी उत्तेजित हुन्छ र कसरी जोर्नीहरू खुम्चन्छन् भन्ने देख्न पाइन्छ। त्यसले आफ्ना शरीरमा भएका अपर्याप्तताका बारे पनि हामी धेरै जागरुक हुन सक्छौं।
हाम्रो कोठाको तापक्रम २५ डिग्री सेल्सियस छ। चिसोले नकठ्यांग्रियोस् भनेर ड्यानियालले कोठाको एअर कन्डिसनरलाई सबैभन्दा तातो मोडमा राखेकी छन्। तापक्रम र अभ्यासका कारण शरीरमा पसिनाको पातलो तह बनेको छ। भुँडीलाई आधार बनाएर जब म आफ्नो नरम गुन्द्रीमा एक खालको चिह्न छाड्छु, यसले मलाई इभ क्लेइनको पेन्टिङको सम्झना दिलाउँछ। कतिपय साथीहरू केही मुद्राको अभ्यासमा शरीर खुम्च्याउँदा या घोप्टिँदा भने लजाउँछन्। योगमा यी मुद्रा पूर्ण रूपमा सामान्य हुन्। तर मेरा मनमा पनि त्यस्ता मुद्रा अभ्यास गर्दैगर्दा ‘अहो लुगा नलाईकन हामी यस्तो के गरिराखेको होला’ भन्ने विचार आउँछ। अनौठोचाहिँ के लाग्छ भने हाम्रा आसनहरू सच्याउन शिक्षिकाले हाम्रो शरीर छुँदाखेरि पनि मलाई मजै लाग्छ। (स्मरण रहोस् सामान्य अवस्थामा नेपाल र दक्षिण एसियामा जस्तो पश्चिमा देशहरूमा आफ्ना परिवार, श्रीमान्– श्रीमती, प्रेमीप्रेमिकाबाहेक साथीकै शरीर पनि हत्तपत्त छुँदैनन्, केटा होस् या केटी।)
अन्तिमको ‘विश्राम आसन’को अवधिमा, ड्यानियल हामीलाई आआफ्नो मोजा लगाउन भन्छिन्। भन्नुको अर्थ हामी पाँच युवती सवासन मुद्रामा गुन्द्रीमा नग्न छौं, हात र गोडा जमिनमा फैलिएका छन् र मोजा लगाउँदै हुन्छौं। त्यसपछि हामी अरू लुगा लगाउँछौं। म आफ्नो योग–प्यान्ट, जुत्ता र बर्लिनमा मलाई जाडोयाममा जोगाउने आफ्नो मोटो जाकेट लगाउँछु। तर यतिखेर मेरा केही कुरा बदलिएका छन्। यसो भन्दा बढाइचढाइ गरेजस्तो लाग्न सक्छ, तर मलाई म वरपरको संसारसँग झनै एकाकार भएझैं लाग्छ, त्यसको अर्थ जेसुकै होस्। मलाई आनन्दको महसुस भएको छ र त्योभन्दा धेरै अचम्मको कुरो, यौनिक रूपमा आफू झनै सुन्दर भएको अनुभूति भएको छ। सम्भवतः जीवनको रसिलोपना यसमार्फत प्रकट भएको होला।
(भाइस डटकमबाट अनूदित)
तीनकुने पुलमा बम आतंक (फोटोफिचर) 2661
दीपक मनाङेको नागरिकताबारे छानबिन सुरु 5101
स्टेसनरीमा आगलागी,साढे ४२ लाखको क्षति 47
पाँचथरमा एक हजार च्याब्रुङ प्रदर्शन (फोटोफिचर) 35
खेल उद्घाटन गर्ने क्रममा लडेर मेयरको हात भाँचियो 496
प्रधानन्यायाधीशको विरोध गर्ने रञ्जु दर्शनासहित एक दर्जन पक्राउ 467
प्रदेश-२ का मुख्य न्यायधीवक्ता विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट 885